Ahoana ny fomba fitateram-bahoaka any Istanbul mandritra ny 4 andro? Metro Metrobus sy Ferry Asa? | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulAhoana ny fomba fitateram-bahoaka any Istanbul mandritra ny 4 andro? Metro Metrobus sy Ferry Asa?
15 / 05 / 2020 34 Istanbul, Railway, ANKAPOBENY, KENTİÇİ Rail Systems, Headline, Faritra Marmara, Metro, TORKIA, tram
Manao ahoana ny metro, metrobus ary ferry mandeha ao Istanbul mandritra ny andro?
Ny curfew, nampahafantarina anelanelan'ny valan'aretina Covid-19 dia ho ampiharina koa amin'ny 16 ka hatramin'ny 19 Mey. Raha mijanona ao an-tranon'izy ireo ny mponina ao Istanbul taorian'ny fe-potoana voafetra mandritra ny 4 andro, maro amin'ireo orinasan'ny İBB sy ireo zanany ao aminy no hanohy ny serivisy tsy misy fanelingelenana, mba hitandroana ny fandriam-pahalemana ao an-tanàna sy hiasana tsy tapaka. Manana fahafahana hiasa tsara amin'ny lalana eny an-tanàna sy eny an-dalambe ao amin'ireo làlam-pandrosoana nambara teo aloha, ny IMM dia hanana fotoana hamitaana ireo tetik'asa tanterahana mandritra ny 11 andro ho avy haingana.
Ao anatin'ny sangan'asan'ny valan-javaboary Covid-19, ny Fanisana Metropolitan Istanbul (IMM) dia hanohy ny asany amin'ny mponin'i Istanbul izay manana olona 16 mandritra ny 19 ora, mandritra ny 4-andro. Ankoatry ny filana fototra toy ny fitaterana, rano, entona voajanahary ary ny mofo, İBB, izay hanohy ny serivisy fiarovana miaraka amin'ny fampiasana legioma, voankazo, fikarakarana antitra ary kilemaina, serivisy fandevenana, fanariana fako ara-pitsaboana sy hentitra, ekipa fidiovana finday, ALO 11, asa fanamboarana. tsy ho lany. Nandritra ny làlana tsy nolazaina teo aloha dia nanana fahafaham-potoana haingana hamita haingana ny IMM noho ny fivoaran'ny tetik'asa izay nahitana ny fivezivezen'ny fiara sy ny mpandeha an-tongotra, noho ny nandaozan'ny lalana sy ny arabe. ny İSKİ KadıköyAo amin'ny Seyit Ahmet Creek, ny tetikasa sasany izay natao tao amoron-dranomasina Ortaköy dia ho vita aloha kokoa noho ny fotoana voatondro ho vita ary hatsangana amin'ny fanompoana amin'ny faran'ny volana Jona.
TSY MAZAVA INDRINDRA ao AMIN'NY HOMINANY ETO ARAKA NY TOERANA
Ireo ekipa momba ny fahadiovana finday ao amin'ny sampana fitsaboana IMM dia hanohy ny hetsika fanadiovana azy ireo any amin'ireo andrim-panjakana sy ny hopitaly. Ho an'ny fanodinkodinam-bolo any ivelany dia olona 10 no hanohy ny serivisy mandritra ny 5 andro miaraka fiara 4 ary ho an'ny disin-trano anatiny, olona 64 no hanohy ny serivisy amin'ny asabotsy, alahady ary alatsinainy misy fiara 30. Mba hiadiana amin'ny moka ateraky ny fiakaran'ny mari-pana, dia olona 412 no hanao asa fametahana manerana ny tanàna ny alatsinainy.
İBB, izay hanohy ny serivisy fikarakarana ara-pahasalamana ao an-trano ny alatsinainy sy talata, miaraka amina mpiasa 182 sy fiara miisa 69, no hiasa amin'ny Community Mental Health Services izay misy mpiasa 15, mpitsabo aretin-tsaina 3 ary psikolojia 76 mandritra ny 4 andro.
TOKONY ISPARK ETO HITADIDINA
LotsSPARK toeram-piantsonan-dehibe dia hikatona mandritra ny 4 andro. Na izany aza, mba hialana amin'ny zava-tsarotra mandritra ny andro fanararaotana, olona 203 ISPARK tanteraka, anisan'izany ny foiben'ny renivohitra, Toeram-piantsonan'ny fiara misokatra sy fivarotana, Alibeyköy Cep Bus Station P + R, İstinye ary Tarabya Marina, Bayrampaşa Voly-Fankalazana voankazo ary Kozyatağı tsena. eo am-perinasa.
ISKI VONONA MBOLA TOOROA KOA FAHOMBIAZANA
Amin'ny curfews, ny İSKİ dia manana fahafahana miasa bebe kokoa noho ny fiara be sy ny fitohanan'ny olona. Ireo tetikasa, izay ho vita amin'ny fotoana maharitra, dia mivoatra haingana kokoa noho ny amin'ny fialam-boly sy ny arabe. Eo ambanin'ny famerana ny curfew 4 andro, İSKİ dia hanatanteraka ny asany any amin'ny toerana 5 samihafa any Istanbul amin'ny rano fako, ranon-drano, fanatsarana ny rano ary fisotro rano, misy olona 850 40.
POINTSY IZY İSKİ HANATRIKA
Amin'ny lafiny Eropeana;
Besiktas Barbaros Boulevard, Besiktas Ortaköy, Besiktas Esci Nedim Caddesi, Besiktas Nisbetiye Caddesi, Zeytinburnu 10. Yil Stream, Bakırköy Kennedy Caddesi, Bakırköy İstanbul Caddesi, Bakırköy Yeşilköy, Bakırköy Galeria AVM, Avcılar Saadetdere, Şişli Akar Caddesi, Şişli Dolapdere Caddesi, Eyüp Haliç -Yavedüt Caddesi, Beyoğlu Dolapdere Caddesi, Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi.
Eo amin'ny lafiny Anatolian;
Pendik Ankara Caddesi (Làlana amin'ny seranam-piaramanidina Sabiha Gökçen), Kartal Meydan, Kartal Cengiz Topel Caddesi, Kartal Karlıktepe, Kadıköy Dock, Kadıköy E-5 ambanin'ny tany, Kadıköy Dinlenç Creek, Üsküdar Beach, Faritr'i Üsküdar, Üsküdar Libadiye Caddesi, Ümraniye Tantavi Tunnel Underpass, Ümraniye Küçüksu Caddesi, Beykoz Ali Bahadır Creek, Ataşehir Libadiye Caddesi, Tuzla Birlik OSB.
HO KOA NY MPITONDRANA, FAMPANDROSOANA VOLA AZONY DIA MAMPIDIKA
İSTAÇ, fanasana mekanika, fanamainana mekanika ary fanapotehana mekanika any amin'ny toerana be olona toy ny làlan-dàlana lehibe, kianja, marmaray sy fidirana amin'ny lalamby, overpasses - underpasses, sehatra / fijanonan'ny fiara fitateram-bahoaka, Bayrampaşa sy ny Ataşehir States, hopitaly ary andrim-panjakana sy fikambanana maro samihafa. dia hanohy asa manasa tànana mandritra ny 4 andro tsy misy fiatoana.
Ao amin'ny asa fanadiovana izay hotanterahin'i İSTAÇ mandritra ny 4 andro, ny faritra 2 tapitrisa 162 arivo 580 metatra toradroa (ny haavon'ny kianja filalaovana baolina kitra 303) dia horavana, ary ny faritry ny 16 tapitrisa 555 80 metatra toradroa (eo ho eo amin'ny habetsaky ny kianja filalaovana 2 319) dia hodiovina amin'ny fanapahana fitaovana mekanika. .
HITAN-DRAISA FANDROSOANA ARA-DALANA
İSTAÇ, mandritra ny famelabelarana ny andro 16-17-18-19, hanasa ny lalana eny amin'ny fasana sy ny manodidina azy eo ambanin'ny sampana İBB Cemeteries, izay natao ho an'ny asa fanadiovana mekanika, ary manendry ekipa manasa tànana hanadio ny teboka tsy azon'ny fiara miditra. Rehefa tapitra ny 4 andro, dia in-141 ny fiara ary mpiasa 416 no hiasa.
FIVORIANA FAMPIASANA SY ASA ATAO FAMPISEHOANA
Amin'ny lafiny aziatika sy eoropeana dia fako ara-pitsaboana 245 taonina, ao anatin'izany ny asidra «quantine» no hangonina amin'ny fiara 4 ny mpiasa 323 amin'ny fiovan'ny 55 andro. Miisa 93 no hiasa amin'ny fanariana. Ny isan'ny mpiasan'ny İSTAÇ izay miasa mandritra ny 4 andro dia 6 775.
TSY MISY ATSORATRA GAS ALOHA
İGDAŞ dia hiasa miaraka amina olona miisa 7 24 amin'ny fihodinana, indrindra ny ekipan'ny Famaliana vonjy maika, 187/4, ny ivon-tariby vaovao momba ny lozam-pifamoivoizana voajanahary, sy ny tarika logika, 883 mba hahafahana mandefa entona voajanahary tsy tapaka sy azo antoka ao amin'ny Istanbul.
TSY HITANANA INDRINDRA
Hanampy olona 621 ao amin'ny Lines City, sambo, pier ary Haliç Shipyard. Nandritra ny 4 andro, dia mitentina 15 ny dia hatao ao anaty berth 11, amin'ny tsanganana 1, sambo 6 ary steamer 382.
Ferstinye-Çubuklu Ferry Line.
TSY MISY INDRINDRA
IETT dia hanao dia 4 42 mandritra ny fe-potoana 340 andro. Fiara 91 miisa 141 no homena hopitaly Public sy tsy miankina XNUMX.
Nanapa-kevitra ny hampihatra curfews mandritra ny 4 andro, ny asabotsy, alahady, alatsinainy ary talata. Olom-pirenena maro, toy ireo miasa amin'ny serivisy ho an'ny daholobe, ny matihanina amin'ny fahasalamana, ny fivarotam-panafody, ny mpanao mofo, no hanohy ny asany mandritra ny andro famerana. Hanohy ny sidiny IETT hatramin'ny 01:00 ny alarobia alina ho an'ny Istanbulites izay tsy maintsy mandeha miasa. Mandritra ny roa andro voalohany amin'ny curfew, izany hoe, ny asabotsy sy alahady, ny ekspeditions 494 dia hatao miaraka amin'ny fiara 488 na 8 ihany. Amin'ny alatsinainy sy talata dia sidina 358 494 no halamina miaraka amin'ny fiara 512 na 12 ihany koa. Ny fitaovam-pitaterana dia hotehirizina ho an'ny fangatahana eo no ho eo eny amin'ny tsipika, ary raha misy ny fangatahana dia hitondrana azy ireo amin'ireo tsipika mifandraika.
Ankoatr'izay, hopitaly tsy miankina miisa 4 sy ho an'ny daholobe no natolotra fiara nandritra ny efatra andro famerana. Fiara 91 miisa 141 no nasaina hanompo ny mpiasan'ny hopitaly ny sabotsy, alahady, alatsinainy ary talata.
Amin'ny zotra Metrobus dia hisy sidina 06-minitra eo anelanelan'ny 10 maraina ka hatramin'ny 3 maraina amin'ny asabotsy sy alahady. Hisy ny fanitarana eo anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 16 isaky ny 10 minitra. Averina eo anelanelan'ny 16 ka hatramin'ny 20 ihany koa no atao isaky ny 3 minitra. Ny sidina 20 ka hatramin'ny 24 dia hotanterahina isaky ny 15 minitra.
Amin'ny alatsinainy sy talata dia hisy ny fitsangatsanganana isaky ny 06 minitra eo anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 3 maraina, isaky ny 10 minitra eo anelanelan'ny 16 ka hatramin'ny 10, isaky ny 16 minitra eo anelanelan'ny 20 ka hatramin'ny 3, ary isaky ny 20 minitra eo anelanelan'ny 01 sy 10.
METROBUS TRIP RANES
Hatramin'ny fotoana 16-17 Mey 18-19 Mey
06: 00 - 10: 00 3 minitra 3 minitra
10: 00 - 16: 00 10 minitra 10 minitra
16: 00 - 20: 00 3 minitra 3 minitra
20: 00 - 00: 00 15 minitra X
20: 00 - 01: 00 X 10 minitra
LIVE BROADCAST AVY ANY BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ
Mandritra ny 4-andro curfew, i Boğaziçi Yönetim A be dia eny an-tsaha any amin'ireo sampana serivisy, İBB, mpiara-miasa ary faritra ampiasain'ny mponina Istanbul, miaraka amina ekipa 102 XNUMX izay ahitana mpiasa teknika sy fanadiovana.
Ho fanampin'izany, ho an'ireo ray aman-dreny izay mandany fotoana ao an-trano noho ny fandrarana, ny mpitsabo manam-pahaizana Ceyda Yanar dia hihaona amin'ny mpihaino amin'ny resaka miresaka ny votoatin'ny "Fitantanana ny zaza sy ny tebiteby mandritra ny vanim-potoana Pandemena" tamin'ny fampitana mivantana avy amin'ny kaonty Boğaziçi Yönetim tamin'ny alahady 16:00.
KIVORIANA NY FIKOMPOANA DIA TOKONY
İSTON, Hacı Osman Grove, nampanan-tany Kadıköy Kurbağalıdere Yogurtçu Park Ranomasina sy ny tanimbary eo anelanelan'i Moda, toeram-pamokarana Stadium Olimpika Atlantika Atatürk, Beylikdüzü ary Avcılar mpandeha an-tongotra mitazona fikojakojana sy fanamboarana, Büyük Istanbul Bus Terminal pavilion fandaharana, Gemez Metro Station, Göztepe Metro Station Entrance Pavement Arrangement, Giyimk Ny rindrina vita amin'ny rindrina vita amin'ny fanamafisana ny arabe sy ny lalana ambanin'ny tany, Yeni Mahalle Metro, Chef Metro Karadeniz Mahallesi, zaridainam-panjakana, Güngören Kale Center fandaharana fifamoivoizana, Fikambanan'ny mpandeha mpandeha an-tongotra Hasan Tahsin, Sintera IETT sy Trano Havaist, Fandaharam-potoana, Ayukice Buğrahan Street Concrete Pavement Construction Work, Bağlar Caddesi Con Conquial Pavement Construction, arrangementamlar Caddesi mpandeha an-tongotra, Sarıyer Özdereiçi fananganana rindrina vato, Beylikdüzü Cemevi ny fanamboarana lalana vita amin'ny làlana.
Hotanterahina ihany koa ny asa amin'ny fikojakojana sy fanamboarana ireo valan-javaboary maro samihafa eo ambanin'ny talen'ny Direction parks and Gardens. Amin'izany toe-javatra izany, olona miisa 779 ISTON sy mpiasa subcontractor no hiasa. Ho fanampin'izany, ny famokarana dia hotanterahina tsy misy fiatoana any amin'ny orinasa İSTON Hadımköy sy ny Tuzla eo anelanelan'ny 16-19 Mey.
17 TOROHIDY 840 TON ASPHALT CANCAL PLANNED
İSFALT dia ho eny an-tsaha miaraka amina mpiasa 853 amin'ny fanatanterahana ny famokarana asfika sy ny fampiharana fitrandrahana asfalt ary olona 260 ho an'ny fandidiana ny famonoana otrikaretina.
Fandalinana amin'ity dingana ity; Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kadıköy, Büyükçekmece, Sarıyer, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Bağcılar, Avcılar sy Bakırköy. Mahatratra 17 840 taonina ny fampiharana asphalt dia kasaina hatao.
TSY MAINTSY NY AINA NO
Fiara 270, mpiasan'ny mpamily 270, mpiasa sosialy 270 ary mpiasa 270 no miasa hiasa amin'ny famoahana ireo fonosana fanampiana ho an'ireo olom-pirenena sahirana voafaritry ny talen'ny asa fanompoana sosialy.
Ny fitaterana, ny herinaratra, ny kafe ary ny serivisy famonoana bibikely dia hitohy mandritra ny andro miaraka amin'ny fantsom-pandehanana mba hahafahana manatanteraka ny serivisy ho an'ny besinimaro.
AN-TRANO SY NY IFTAR AZONAO
Ny Logistics Support Center dia hanohy hiasa 24 ora isan'andro mba hiantohana fa atao tsara ny serivisy ho an'ny daholobe ary ny serivisy ho an'ny besinimaro dia afaka mitohy sy tohizana. Ny ilana sakafo Iftar sy Sahur dia hasaina sy alefa any amin'ny mpiasa mpamokatra afo sy mpamono afo miisa 7 any an-dakozia.
Foiben'ny fanohanana Logistics Ny serivisy hafa hotohizana mandritra ny efatra andro dia toy izao manaraka izao;
- 153 White Tables, Departemantan'ny fandevenana, ny polisy ary ny mpiasan'ny mpiambina rehetra dia hatolotra any amin'ny toerany misy ny andraikiny, iftar and Sahur.
- Hotohizana ny fahafaham-pon'ny olom-pirenentsika ao amin'ny toby tsy manan-kialofana.
- Iftar, olona 10 eo ho eo no hiomana amin'ny kaominina monisipaly izay mitaky azy io.
- Ny serivisy amin'ny trano fandraisam-bahiny dia hitohy ho an'ny matihanina ara-pitsaboana 32 amin'ny Zeytinburnu Social Facility.
- Hotanterahina ny filàna ara-pahasalamana sy ny zava-pisotro ilain'ny mpiasan'ny fahasalamana mitoetra ao amin'ny hotely.
ALO 153 24 ANDRO ARY DUTY
Ny foibem-piantso Alo 153, izay manome fanampiana amin'ny lafiny rehetra any Istanbul, dia hiasa 24 ora isan'andro amin'ny curfews. Ny isan'ny mpiasan'ny serivisy ho 691.
HOLIDAY ATY trano
Ny IMM dia hikarakara ny hetsika 19 Mey amin'ny tontolo nomerika noho ny fepetra amin'ny valan'aretina sy ny curfews. Ireo atolotra hozaraina avy amin'ny kaonty media sosialy ny departemantan'ny kolotsaina IMM eo anelanelan'ny 16-19 Mey; Horonantsary fanadihadiana, horonantsary an-tsarimihetsika sy fampisehoana an-tsary sy maro hafa no ahafahan'ny mponin'i Istanbul mankafy ny fetin'ny tranony
4-ANDRIAMANITRA INDRINDRA INDRINDRA AN-TOKONY ETO ANTANBUL
ASA ISTANBUL, ny alatsinainy 18 Mey teo anelanelan'ny 21:00 ka hatramin'ny 22:00 @ ıbbsporistanbul anaotube fantsona sy fahitalavitra chess anaotube NightBB Spor Nightstanbul Online Chess Tournament Final Night dia halefa ao amin'ny fantsona azy. Lalao mivantana amin'ny fampitana mivantana, mpilalao chess anaotubeSabri Can dia afaka maneho hevitra miaraka amin'ny mpandika Gürcan Engel sy Talha Emre Akıncıoğlu. Ho fanampin'izany, i Renay Onur, ny tale jeneralin'ny Spor Istanbul, dia hiatrika ny maha-vahiny azy.
Ny talata 19 mey, tamin'ny fanokafana ny Atatürk Kent Orman, ny fandraisana anjaran'ny vondrona mihazakazaka sy ny atleta nasionaly dia handray anjara amin'ny fanohanan'ny Sports Istanbul, Tale jeneralin'ny Distrika Metropolitan Istanbul Metropolitan ho an'ny fampiasana ny fitaoman'ny media sosialy.
Ny serivisy hafa atolotry ny mpiara-miasa amin'i BBB amin'ny 16-17-18-19 dia toy izao manaraka izao:
Mofo vaovaon'i Istanbul: Hanohy ny asa miaraka izy io miaraka amina orinasa 3, balafomanga 514 ary mpiasan'ny 364 XNUMX.
İSYÖN AŞ: Gürpınar Seafood Products sy Kadıköy Hanampy mpiasa miisa 50 amin'ny tsena Talata.
İSBAK AŞ: Ny fanamafisam-peo metro, ny rafitra famantarana, ny fandaharana, ny fampiharana, ny fametrahana ary ny fandidiana dia hitohy amin'ny olona 108 manerana ny tanàna.
Beltur AŞ: Hopitaly 40 no hiasa miaraka amin'ireo mpiasa 55 eo ho eo amin'ny isa 400.
I İSTTELKO: Mba ho fitazonana ny rafitra fotodrafitrasa serasera rehetra tsy misy fanelingelenana, ny Data Merkei dia hanohy miasa nefa tsy misy fahatapahana, misy manam-pahaizana ara-teknika 10, 30 ny serivisy WIFI, 8 amin'ny serivisy WIFI, 6 amin'ny serivisy IT ary 24 amin'ny serivisy fotodrafitrasa.
İSTGÜVEN AŞ: Mandritra ny curfew mandritra ny 4 andro, olona 5 860 no hanohy hiasa any amin'ny toerana 830.
AĞAÇ AŞ: Ho ampahany amin'ny fikolokoloana sy fandaminana maitso any Istanbul, olona 723 no hanohy ny asany miaraka amin'ny fiara 306.
İSPER AŞ: Hospice, fahasalaman'ny tokantrano, Serivisy ara-tsosialy, polisy, fitsaboina sy fitsaboana amin'ny fitsaboana aretin-tsaina, İSK Services, Serivisy sembana, Serivisy fialam-boly, Hetsika amin'ny zaza, tanora sy fanatanjahantena, fifandraisana amin'ny daholobe, Dirt d'Antsialy, Hızır vonjy maika, İGDAŞ, Torohevitra momba ny fanabeazana ho an'ny fianakaviana sy foibem-pianarana, Toro-miasa. Hanohy manompo an'i Istanbul sy ny mponina ao aminy izay manana mpiasa maherin'ny 4 miasa ao amin'ny Women Family Services, Orchestras ary Theatre, Rehabilitation of Orphaned Animals.
Departemantan'ny IMM Cemeteries: Izy io dia hiasa miaraka amin'ireo mpiasa 245 eo ho eo sy fiara miisa 350 hasaina hiarovana ny serivisy.
Istanbul Fire Brigade: Hanampy fiara 849 sy mpiasa 2 743 izy io.
Polisy IMM: Mandritra ny efatra-andro curfew dia olona 23 483, fiara 220 ary ekipa XNUMX no hiasa an-tsehatra, mifindra sy mifandimby. Izy io dia hanolotra serivisy amina faritra maro avy amin'ny fifehezana ireo toeram-piasana izay tokony hijanona tsy hikatona amin'ny fivorian'ny mpitaky ny fahasalamana.
Hamidiye AŞ: Raha mitohy mandritra ny 4 andro ny famokarana sy ny fandefasana, ny milina sasany dia havoaka amin'ny 19 mey. Mpiasa birao; raha tsy misy filàna maika dia tsy hiasa ny fandroana amin'ireny andro ireny. Mpivarotra 167 no hanohy miasa mandritra ny 263 andro miaraka amin'ny fiara 760 sy mpiasa 4.
Miasa amin'ny faran'ny herinandro any Istanbul ve ny Metro sy Ferry?
Aiza ny fotoana fitateram-bahoaka mandritra ny faran'ny herinandro any Istanbul ..? Metrobus, Bus,…
Bus sy Metro any Istanbul amin'ny Fetiben'ny Ramadany tsy hoe maimaim-poana fa tambabe
Ny fiara fitateram-bahoaka rehetra mifandray amin'ny IMM Free
IMM Notsaroana ny teboka mitsikera any Istanbul mandritra ny curfew